Terms uye Conditions Yenyika Tour |
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pakati 4th-rechi10 August 2016 (GMT).
Kuti ave kukwikwidza pamitambo bhonasi, vatambi vanofanira kuchengetesa uye wager they kushoma pakati £ 10 uye atambire slots mutambo chokuita iroro.
4fung August – Ayarendi – Shamrock 'n’ rora
5fung August – Speini – Gonzo Kutsvaka Kwevanhu
6fung August – Mekisiko – Spinata Grande
7fung August – Kenya – guru 5 Safari
8fung August – China – rombo 88
9fung August – USA – Gunslinger kuti Gold
10fung August – UK – Best of British
A bhonasi pamusoro 25% pakati deposits enyu kusvikira vaifanira pamusoro £ 100 zvichawedzerwa nhoroondo mutambi wacho.
Kukwidziridzwa Izvi zvichaita chete kuva rinoshanda kwaunoita dhipozita rokutanga rimwe zuva munguva promotional nguva.
Bhonasi mari pakupfuwa kusimudzirwa ichi chete kunogona kushandiswa kutamba yedu mitambo slots.